CALWASAADKA CORONA: Isagoo luudaya ayuu tareen soo fuulay kaddibna waa ku dhex dhintay (Daawo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka CALWASAADKA CORONA: Isagoo luudaya ayuu tareen soo fuulay kaddibna waa ku dhex...
CALWASAADKA CORONA: Isagoo luudaya ayuu tareen soo fuulay kaddibna waa ku dhex dhintay (Daawo)
(Bangkok) 02 Abriil 2020 – Bukaan qaba coronavirus ayaa tareen ka raacay caasimadda Thailand – balse waxaa markii dambe la helay isagoo mayd ah oo dhex yaalla qaybtii uu ka saarnaa tareenka.
Anan Sahoh, 56 jir, ayaa isagoo qufacaya oo luudaya tareenka kasoo qabsaday saldhigga Bangkok sida ka muuqata sawirrada CCTV-ga.
Anan, oo ul ku tukabaya dhowaanna kasoo laabtay Pakistan ayaa u safrayey Narathiwat, waxaana la seegay inuu wejiga uga candhuufay rakaab saarnaa tareenka oo uu kasoo raacay saldhigga Bang Sue ee Bangkok.
SIDEE WAX U DHECEEN? Anan ayaa heerkulkiisa lagu eegay saldhigga wuxuuna muujiyey heerkul caadi ah oo ah 96.8F (36C), yeelkeede, markii in yar la socdey wuxuu bilaabay matag iyo qufac, misna in yar kaddib ayuu roonaaday markii la gaarey saldhigga Hua Hin.
Waxaa lagula taliyey inuu ku haro Hua Hin oo nasto, balse wuxuu ku adkaystay inuu safarkiisa sii wadanayo.
Hayeeshee, abbaarihii 10.15pm, ayaa la arkay isagoo ku dhacay kuna dhintay musqusha tareenka horteeda markii uu markii la gaarey degmada Thap Sakae, markii maydkiisa la baarayna waxaa soo baxday inuu qabey Covid-19 iyo sonkoroow.
Waxaa iminka la karaantiilay 15 qof oo la saarrayd qaybtii uu tareenka ka joogey, iyadoo qaybtaa inta tareenka laga furay la buufiyey. Waxaa sidoo kale la raadinayaa raadkiisa si loo karaantiilo dadkii uu soo maray.
Previous articleCaabuqa corona oo ka cabaadsiiyey burburiyaha adduunka ugu wayn (Warqad baryootan ah oo kasoo baxday)
Next articleSiyaasi reer Puntland ah oo maamullada Somaliland & Puntland u jeediyey inay hal arrin uga daydaan Galmudug & KG Somalia